NFT တွေဘယ်လိုဖန်တီးရောင်းချမယ် (၁)
NFT ဆိုတာ (Non-fungible Token) ရဲ့အတိုခေါက်အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ Blockchain နည်းပညာ သုံးထား တဲ့ ဒေတာယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယိုတွေ အသံတွေနဲ့ အခြားသော ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်အမျိုးအစားတွေ လိုဘဲ အလွယ်တကူပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ကိုယ်စားပြုဖို့ NFTs ကိုသုံးနိုင်ပြီး verified and public proof of ownership ဖြစ်စေဖို့ blockchain နည်းညာကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်မှု (fungibility) မရှိခြင်းက Bitcoin ကဲ့သို့သော blockchain cryptocurrencies နှင့် NFTs များကို ခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲလိုတော့ ဝီကီမှာ ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။ NFT သည် မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖိုင်အမျိုးအစားမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အနုပညာလက်ရာတစ်ခု၊ ဆောင်းပါးတစ်ခု၊ တေးဂီတ သို့မဟုတ် "Disaster Girl" ကဲ့သို့သော meme တစ်ခု စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီတော့ NFT တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးကြလဲ ဘယ်လိုရောင်းချတာလဲ စသဖြင့် နည်းနည်းပါးပါး တီးမိခေါက်မိ စေဖို့ အတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက်လေ့လာရင်းဒါလေးကိုရေးဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာနေတာဖြစ်ပြီး များမကြာတဲ့ အနာဂါတ်ကာ လမှာ အလျှင်အမြန်ထွန်းကားလာမည့် နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်တာမို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးသုံးစွဲကြည့်ဖို့ ဖန်တီးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Crypto သမားတွေ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာများများလာပါပြီ။ သူတို့အတွက်တော့ NFT ကမစိမ်းလောက်ပါဘူး၊ လက်ရှိ အနေအထားအရ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လေ့လာရင်းသင်ယူရင်း အတွေ့အကြုံစယူရမှာပါ။ အခွင့်အလမ်း သစ်တွေ ဖန်တီးမှုအသစ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း scam တွေကတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။
အခုဖော်ပြပါအကြောင်းအရာတွေမှာ ပြည့်စုံမှုမရှိရင်ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု့လို့ခံယူပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ မှ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေ ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
NFT ကို ဘယ်လိုဖန်တီးရောင်းချကြမလဲ
NFT တစ်ခုကို ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာကတော့ ဖန်တီးသူ အနုပညာရှင်များစွာရဲ့စိတ်ထဲမှာ မေးခွန်း ထုတ်စရာပါပဲ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များက ရှုပ်ထွေးပေမယ့် ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ဖန်တီးခဲ့ပြီးပါပြီ၊ အချို့သော NFT အနုပညာလက်ရာများက ဆွဲဆောင်မှုရှိတာကြောင့် ဈေးလဲအတော်ရပါတယ်။ NFTs များမှတဆင့် ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေရောင်းချပြီး ငွေအနည်းငယ်ရနိုင်မလားလို့ ယနေ့ခေတ်ဖန်တီးသူ အများစုက တွေးတော နေကြပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သော NFT အနုပညာတွေက ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာမကဘဲ သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Beeple's Crossroad လို့ခေါ်တဲ့ အနုပညာရှင်ရဲ့ဖန်တီးမှု ကို 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်း ဈေးကွက်ထဲမှာ $6.6 သန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးသောတခြား NFT အနုပညာလက်ရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလိုအောင်မြင်မှုကို ကိုယ်လိုက်လုပ်တိုင်းရနိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဖန်တီးမှုက အခုထက်ပိုကောင်းနိုင်တယ်လို့လဲ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
အရောင်းအ၀ယ်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် Crypto ကုမ္ပဏီများကနေလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး NFTs များကိုဖန်တီး ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ထိန်းသိမ်းသည့်ပလက်ဖောင်းများကို အခကြေးငွေပေးတင်ပြီး ရောင်းချချိန် မတိုင်မီသိမ်းဆည်းပေးထားတာနှင့် ရောင်းချပြီးနောက်တဲ့အခါ NFT အနုပညာရှင်များအတွက် အခကြေးငွေ အားလုံးကို ကောက်ခံပေးပါလိမ့်မယ်၊ ပြီးရင်တော့ digital wallet များမှတဆင့်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Cryptocurrency အရင် ဝယ်ပါ။
ပထမဆုံးနားလည်ရမယ့်အချက်က NFT တစ်ခုကို 'mint' (ထုတ်လုပ်ရန်) ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းအများစုက NFTs များကိုပထမဆုံးစဖွင့်ရာနေရာဖြစ်တဲ့ open-source blockchain platform Ethereum ၏ မူရင်း Cryptocurrency ဖြစ်တဲ့ Ether ကိုသုံးတာလည်းရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး NFT ပရောဂျက်ကို Ethereum blockchain မှာ 2015 ကစတင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ၊ crypto ငွေကြေးကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ စိတ်ဝင်စားမှုများ တိုးလာပါတယ်။ NFT များရဲ့ စုစုပေါင်းငွေကြေးတန်ဖိုးက 2021 ခုနှစ်မှာ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးလာခဲ့ပြီး NFT များရဲ့ ရောင်းအားတွေဟာ ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း $2 ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး ယခင်သုံးလပတ်ထက် အဆ 20 ပိုများလာပါတယ်။
Bitcoin နှင့် အခြားသော Cryptocurrencies များလိုဘဲ Ether (အတိုကောက် ETH ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည်) ၏တန်ဖိုးသည်လည်း အတက်အကျမြန်နိုင်ပါတယ်၊ 2021 မှာတော့ 1 ETH ၏စျေးနှုန်း $1,000 အောက်တွင်မှ $4,000 ကျော်သွားသော်လည်း နာရီပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရာနှင့်ချီ၍ အတက်အကျ အပြောင်းအလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
Ethereum or some Cryptocurrencies တစ်ခုခု ကိုဝယ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ 'ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်' လို့ခေါ်သည့်အရာကိုဖန်တီးပြီး ၎င်းကို ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့NFTပလပ်ဖောင်းသို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Digital Wallet (ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်)ဝန်ဆောင်မှုများစွာရှိသော်လည်း browser and apps အဖြစ် ရရှိနိုင်သည့် MetaMask လိုဟာမျိုးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Cryptocurrencies များထဲက အချို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
· Electrum - Best for Bitcoin.
· Coinbase - Best for Beginners.
· Mycelium - Best for Mobile.
· Ledger Nano X - Best Offline Crypto Wallet.
· Exodus - Best for Desktop.
(၂) Digital Wallet (ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်)ဖန်တီးပေးပါ
Digital Wallet တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက် PC သို့မဟုတ် PlayStore or AppStore မှာ သင့်တော်တဲ့ App တစ်ခုကိုရှာပြီး download လုပ်ပါ။ အစောပိုင်းကပြောသလို PC or mobile သုံးနိုင်တဲ့ အရာမျိုးကပိုသင့်တော်ပါတယ်။
Pwssword ကောင်းကောင်းသုံး၊ security အဆင့်မြင့်မြင့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။
(၃) ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ ပိုက်ဆံထည့်ပါ။
ကိုယ့်မှာ Digital Wallet တစ်ခုခုရှိတာနှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ ၎င်းထဲသို့ Crypto အချို့ကို ထည့်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ပါတယ် - 'Buy' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Buy ETH or some Cryto type ကို ရွေးချယ်ပါ။ Apple Pay သို့မဟုတ် Debit or Credit card တွေကနေတဆင့် Cryto ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါမယ်။ အထဲမှာထည့်မယ့် ပမာဏကို မိမိစိတ်ကြိုက်ထဲ့ထား ယုံပါဘဲ။
(၄) ပိုက်ဆံအိတ်ကို NFT ပလပ်ဖောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်အများစုက နည်းလမ်းတူတူဘဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ Cryptocurrencies အချို့ကို စုဆောင်းထားပြီး သုံးစွဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျင် ကိုယ့်ရဲ့ NFT ကိုဖန်တီးရန် အသုံးပြုမည့် NFT ပလပ်ဖောင်းသို့ သွားနိုင်ပါပြီ။ NFT platform အများကြီးရှိတာကြောင့် နှစ်သက်ရာ ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါမယ်။ <//Please googling //> လုပ်ကြည့်ပါ။ NFT platforms တွေ အများကြီးတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုတာက ပထမဆုံး Cryptocurrencies တစ်ခုခုကို ဝယ်ပြီး ကိုယ်သုံးမယ့် Digital wallet တစ်ခုထဲထဲ့ထား၊ ပြီးတဲ့အခါ NFT တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက် ပြင်မယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ကဘာ platform ကိုသုံးပြီး NFT လုပ်မလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ဖို့ပြောတာပါ၊ နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က NFT creation platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Night Café or Rarible.com လိုဟာမျိုးကိုသုံးပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့နမူနာအဆင့်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အပေါ်မှာရေးထားတာတွေအားလုံးရဲ့ အတိုချုံးသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Cryptocurriences and wallet သုံးနိုင်ပါတယ်။
1. Setup coinbase.
2. Buy ETH in coinbase.
3. Setupawallet. ...
4. Now you can use Coinbase to transfer funds (ETH) into your MetaMask or hard wallet.
5. Link your wallet to OpenSea.
ထပ်ရှင်းရမယ်ဆို wallet ကို MetaMask သုံးတယ်ဆိုပါစို့ အဲဒါနဲ့ NFT platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OpeanSea or Rarible.com နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို တော်တော်လေး ခရီးရောက်ပါပြီ၊ NFT ကို ဖန်တီးပြီး market ထဲမှာ ဘယ်လိုရောင်းမယ်ဆိုတာလေး ထပ်ပြေပါမယ်။ <To be continue>
NFT အနုပညာဆိုတာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စကြဝဠာတွင် လုံး၀တည်ရှိနေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီအရာကို မထိမကိုင်နိုင်သော်လည်း ကိုယ်ကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ NFT က အချစ်လိုဘဲ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့မရပေမယ့် ခံစားနားလည်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေက တန်ဖိုးဖြတ်မရတော့သလို အများကြီးတန်ဖိုးရှိသွားလိမ့်မယ်။
Labels: Crypto NFT